Kitchens na showcases: gị crockery na anya | Bezzia
Maria onyekwere | 20/06/2022 20:00 | Aghụghọ mma
Ị ga-emeghari kichin gị n'oge adịghị anya? kichin na kabinet nke anyị na-atụ aro ga-akpali gị! Ngosipụta kabinet na-agbakwunye ọmarịcha na kichin ma mara mma maka igosipụta crockery na iberibe ndị ọzọ mara mma nke ịchọrọ ka onye ọ bụla hụ.
Mana nke ahụ abụghị naanị uru nke itinye kabinet n'ime ime ụlọ kichin. Ndị a na-eme kichin yiri ọkụ, atụmatụ nke anyị nwere ike iji mee ka kichin dị ntakịrị ma ọ bụ ọchịchịrị mara mma. Ị na-amalite ịmasị echiche nke ịkụ nzọ na kichin nwere ihe ngosi?
Anyị ekwuola na kabinet na-agbakwunye àgwà na kichin. Nlele kwa. Na nke ahụ, Ọzọkwa, mgbe anyị na-eji ihe ndị a dochie mechiri emechi na opaque nchekwa, anyị na-enweta ohere dị mfe anya. Ọ bụ ezie na ka ntinye ha ghara ime ka ọ ghara ịdị irè, a ga-edobe ha n'usoro, ma ọ dị anyị ka ọ dị ntakịrị ma tụnyere ya. uru niile nke kichin na kabinet.
Ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na ị ga-agbakwunye ihe ngosi ọzọ na ọrụ kichin gị, naanị ị ga-ekpebi otu esi eme ya. Ma ọ bụ na ị nwere ike itinye ihe ngosi na imewe n'ọtụtụ ụzọ ma anyị na-atụ anya na ọ dịghị onye dị mma karịa nke ọzọ.
1 Kabinet dị elu nwere ihe ngosi
2 ihe ngosi kwụ ọtọ
3 Ihe ozo
Kabinet dị elu nwere ihe ngosi
Nke a nwere ike ịbụ nhọrọ kachasị ewu ewu: dochie ọnụ ụzọ nke ụfọdụ ụlọ elu dị elu na iko iji nweta ohere na ìhè. N'ụzọ dị otú a, kichin ga-adị ka ọkụ na ihe ndị ị na-echekwa n'ime ha ga-echebe site na uzuzu ma ọ bụ griiz.
Echiche dị mfe nke ị nwere ike iji rụọ ọrụ iji nweta atụmatụ mara mma na nke onwe. Kedu? Iji a Ihe dị iche iche maka ihe ngosi nke ahụ na-eme ka ha pụta ìhè na ụlọ ndị ọzọ ma na-enwu n'ime ime ha ka ha dọta uche na ọdịnaya ha.
ihe ngosi kwụ ọtọ
Eleghị anya ị na-eche ihe anyị pụtara site na ngosi ngosi kwụ ọtọ. Ọfọn, ha abụghị ndị ọzọ ma e wezụga ndị na-ewe ihe dum ala ruo n'uko modul. Ha dị egwu na mpaghara ahụ ebe kabinet na-eso ibe ya iji gbajie ọmarịcha mgbidi ma mee ka ọ dị mfe.
Ọ bụghị ihe ngosi niile ga-adị modular na itinye n'ime arịa ụlọ; ị nwekwara ike itinye ya na kichin ngwá ụlọ nwere onwe dị ka ndị ahụ egosiri n'aka nri na foto dị n'elu. Ọ bụrụ na ị na-etinye ha nso na tebụl kichin, ha ga-aba uru nke ukwuu mgbe ị na-edozi tebụl.
Olee otú ibu ka mma? Chee echiche banyere ihe ịchọrọ igosi ma kpachie onwe gị na ihe ngosi nke nwere ike ịnabata ihe ndị ahụ. Dị ka anyị kwuburu ịtụ bụ isi nke mere na ihe ngosi ndị a na-enwu ma na-ebuwanye ibu, otú ahụ ka ọ ga-esikwu ike ịnọgide na-enwe ya. Ị pụghị ichetụ n'echiche mmetụta ọgbaghara nke ihe ngosi na-adịghị mma na-akpata na kichin.
Nhọrọ ndị ọzọ akpọtụrụla bụ nke a na-ahụkarị mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ! Ma ọ bụ na showcases nwere ike a ga-etinye n'ime ngwá ụlọ ọ bụla. Na-ekwu maka ngwá ụlọ, ụfọdụ n'ime ọkacha mmasị anyị bụ ndị na-ejikọta ọnụ ụzọ na-adịghị mma na mpaghara ala na ọnụ ụzọ enyo na elu ụzọ abụọ n'ụzọ atọ. Ha bụ arịa ụlọ na-egbuke egbuke karịsịa na nnukwu oghere ebe ụlọ iri nri na-ekerịta ọnụ ụlọ na kichin. Ọ na-amasị gị?
Ụdị ihe ngosi a ekwesịghị inwe, na mgbakwunye, ọtụtụ omimi, dị mkpa iji chekwaa ụfọdụ efere. na mkpa ohere nchekwa ọzọ ị nwere ike ịbawanye omimi mgbe niile, ma ọ bụrụ na ịchọrọ, nke obere kabinet. N'ihe onyonyo a, ị nwere ike ịhụ ihe atụ nke ụdị niile anyị ji n'aka na ọ ga-amasị gị.
Ụlọ kichin nwere ihe ngosi ọ na-amasị gị? Cheta na ọ bụrụ na ịchọrọ ịdọrọ uche gaa na ihe ngosi ahụ, ọdịiche agba na-adabere na ihe ndị ọzọ dị na ngwá ụlọ ga-abara ya uru. Ọ bụrụ na, n'aka nke ọzọ, ịchọrọ ka a na-ejikọta kabinet n'ime ya, ihe kachasị mma bụ ịkwanyere otu mmecha na agba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Aghụghọ mma » Kitchens nwere ihe ngosi: ihe nri nri gị n'anya